I-MAGL inhibitor kunye ne-FAAH Inhibitor: JW-642 kunye ne-OL-135 kunye ne-PF-750 丨 AASraw
/Blog/Ithala/I-MAGL inhibitor kunye ne-FAAH Inhibitor: JW-642 kunye ne-OL-135 kunye ne-PF-750
ezaposwa ngomhla 08 / 15 / 2018 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
Umsebenzi we-Biological-CAS: 2-1416133-89
Umsebenzi we-Biological-CAS: 4-681135-77
5. Uphengululo lwePF-750
Umsebenzi we-Biological-CAS: 6-959151-50
7. Uphengululo lweJZL-184
Umsebenzi we-Biological-CAS: 8-1101854-58
I-9.Inhibitors ekhethayo ye-monoacylglycerol lipase ethwele iqela elisebenzayo
Isikhokelo sokuthenga i-JW-10 MAGL inhibitor inyathelo ngenyathelo
Ividiyo yeJW 642
I.JW 642 Abalinganiswa basisiseko:
igama: JW 642
Ifomula yeMolekyuli: C21H20F6N2O3
Ubunzima Ezinto: 462.4
1. Ukuhlaziywa kwe-JW-642
JW-642 (1416133-89-5Inamandla, ikhetha i-monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor ene-IC50 ye-7.6, 14 kunye ne-3.7 nM yeempuku, i-rat kunye ne-MAGL yabantu, ngokwahlukeneyo. I-Endocannabinoids ezinje nge-2-arachidonoyl glycerol (2-AG) kunye ne-arachidonoyl ethanolamide zii-lipids ezisebenzayo zebhayoloji ezichaphazelekayo kwiinkqubo ezininzi ze-synaptic kubandakanya ukwamkelwa kwee-cannabinoid receptors. I-Monoacylglycerol lipase (MAGL) yi-serine hydrolase ejongene ne-hydrolysis ye-2-AG ukuya kwi-arachidonic acid kunye ne-glycerol, yiyo loo nto iphelisa ukusebenza kwayo. I-JW-642 sisithinteli esinamandla se-monoacylglycerol lipase (MAGL) esibonisa amaxabiso e-IC50 ye-7.6, 14, kunye ne-3.7 nM yokuthintela i-MAGL kwimouse, iirati, kunye neembrane zengqondo yomntu, ngokulandelanayo. 1 JW-642 ikhetha iMAGL, ifuna ukugxila okuphezulu kakhulu ukuthintela ngokufanelekileyo i-asidi ye-asidi ye-amide hydrolase (ii-IC50s = 31, 14, kunye ne-20.6 µM yeempuku, iirati, kunye neembrane zobuchopho bomntu, ngokulandelelana).
I-JW-642 IINKCUKACHA ZEZIKHONO
Igama lemveliso JW-642
Inombolo yeCAS 1416133-89-5
Umzimba I-Soluble kwi-DMSO> i-10 mM yokugcina kwi-20 ° C
Imbonakalo yomzimba Isisombululo kwi-methyl acetate
Imiqathango Yokuthumela Isampula yokuhlola isampula: iinqanawa nge-blue ice.Wonke ubukhulu obukhoyo: umkhumbi kunye ne-RT, okanye iqhwa elihlaza okwesibhakabhaka xa kuceliwe
Iingcebiso jikelele Ukuze ufumane ubunqamle obuphezulu, nceda ushuthule ityhubhu kwi-37 ℃ kwaye uyigubungele kwibhanki ye-ultrasonic kwithuba elithile. Isisombululo sendawo singagcinwa ngezantsi -20 ℃ ngeenyanga eziliqela.
2. Umsebenzi we-Biological-CAS: 1416133-89-5
I-JW-642 sisithinteli esinamandla se-monoacylglycerol lipase (MAGL) esibonisa amaxabiso e-IC50 ye-7.6, 14, kunye ne-3.7 nM yokuthintela i-MAGL kwimpuku, kumqolo, nakwizinwe zobuchopho bomntu, ngokulandelelana. I-IC50: 7.6 / 14 / 3.7 nM (imouse / i-rat / i-MAGL yabantu)
Ithagethi: i-MAGL inhibitor i-JW-642 ikhetha i-MAGL, idinga ukufikelela kwiindawo eziphezulu kakhulu ukwenzela ukuvimbela ngokuthe tye umsebenzi we-fatty acid amide hydrolase (IC50s = 31, 14, kunye ne-20.6 M ye mouse, i-rat, kunye ne-brain membranes).
3. Uhlolo lwe-OL-135
OL-135 ngu-CNS owangena, onamandla kakhulu kwaye okhethiweyo ongenayo i-FAAH. I-OL-135 ibonisa i-analgesic pharmacology kwiimpawu ezahlukeneyo zezilwanyana ngaphandle kokuphazamiseka kweemoto ezinxulumene ne-CB1 agonism ngqo.AAH Inhibitor OL-135 iphazamisa ukufumana, kodwa ingahlanganisi, ukuxhomekeka kwimeko yokutya. Ukumelana nokutya nokuxhatshazwa kwe-reactivity kuyaqhubeka kungathinteki. Idata ibonisa indima ethile kwi-endocannabinoids kwisigcawu sokwesaba imeko yama-paradigms.
I-OL-135 IINKCUKACHA ZEZIKHONO
Igama lemveliso OL-135
Inombolo yeCAS 681135-77-3
Isitoreji seStock Solution 0 - 4 C ixesha elifutshane (iintsuku ukuya kwiiveki), okanye -20 C ixesha elide (iinyanga)
4. Umsebenzi we-Biological-CAS: 681135-77-3
OL-135 ngu-CNS owangena, onamandla kakhulu kwaye okhethiweyo oguqulwayo we-FAAH ongenayo i-CB1, i-CB2 kunye ne-δ imisebenzi ye-opioid receptors eyenza umsebenzi we-anandamide wenziwe nge-analgesic ne-hypothermic.
I-fatty acid amide hydrolase (FAAH) yi-enzyme ejongene ne-hydrolysis kunye nokungasebenzi kwe-acid acid amides kuquka i-anandamide ne-oleamide. PF-750 inamandla, ixhomekeka ngexesha, i-FAAH inhibitor engenakuphikiswa kunye ne-IC50 ixabiso le-0.6 kunye ne-0.016 μM xa i-FAAH ibuyele i-FAAH emfutshane ngemizuzu eyi-5 kunye ne-60 ngokulandelanayo. I-PF-1 ikhethe kakhulu i-FAAH malunga namanye ama-serine hydrolases, engabonakali nento engacacisiyo yomsebenzi ukuya kwi-750 μM.
PF-I750 IINKCUKACHA ZEZIKHONO
Igama lemveliso PF-750
Inombolo yeCAS 959151-50-9
Umzimba Isisombululo kwiDMSO
6. Umsebenzi we-Biological-CAS: 959151-50-9
I-PF-750 inamandla, ixhomekeke kwixesha, i-FAAH inhibitor engenakuphikwa ine-IC50 yexabiso le-0.6 kunye ne-0.016 μM xa iphinda yenziwe ngaphambili nge-FAAH yabantu yemizuzu emi-5 kunye nama-60, ngokulandelelana. I-fatty acid amide hydrolase (FAAH) yi-enzyme ejongene ne-hydrolysis kunye nokungasebenzi kwe-acid acid amide kubandakanya i-anandamide kunye ne-oleamide. Umsebenzi osekwe kwiprofayili yovavanyo lweesampulu ezahlukeneyo zomntu kunye nomchamo ziveze ukuba i-PF-750 ikhetheke kakhulu kwi-FAAH xa kuthelekiswa nezinye i-serine hydrolases, ingabonakalisi msebenzi ubonakalayo ngaphandle kwesiza ukuya kuthi ga kwi-500 μM. I-PF-750 ibonisa amandla angama-10 angcono kune-URB597 (Sigma # U4133) emva kwe-30 min preincubation. I-PF-750 ikhetheke kakhulu kwi-FAAH. Nokuba iphakame kangange-500 μM, ibingenalo unxibelelwano nee-enzymes ezininzi ezivavanyiweyo, kodwa i-URB597 kunye nezinye ii-inhibitors ze-FAAH ezingakhange zisebenze kakuhle ekugxininiseni okuphantsi (100 μM).
I-JZL-184 (1101854-58-3) yeyona nto inamandla kunye nokukhetha inhibitor ye-MAGL ene-IC50 ye-8 nM kunye ne-4 μM yokuthintela i-MAGL kunye ne-FAAH kwiimbumba zobuchopho ngokulandelelana. Ixabiso le-IC50: 8 nM Ithagethi: MAGL inhibitor in vitro: I-JZL-184 yongeza i-DSE kwii-Purkinje neurons kwizilayi ze-cerebellar kunye ne-DSI kwi-CA1 i-pyramidal neurons kwizilayi ze-hippocampal. I-JZL-184 inamandla ngakumbi ekuthinteleni i-mouse MAGL kune-rat MAGL. kwi-vivo: Xa ilawulwa kwiimpuku kwi-16 mg / kg, ngaphakathi, i-JZL-184 inciphisa umsebenzi we-MAGL nge-85%, iphakamisa amanqanaba engqondo ye-2-AG nge-8-fold, kwaye inyusa imisebenzi ye-analgesic kwiintlobo ngeentlobo zeentlungu ezilinganisa ngokuthe ngqo ukulinganisa ngqo i-cannabinoid esembindini (CB1) i-agonists. Ulawulo olunamandla lwe-JZL-184 ukuya kwi-FAAH (- / -) iimpuku zonyusa ubungakanani beseti yeempendulo ze-cannabimimetic, unyango oluphindaphindiweyo lwe-JZL-184 lukhokelele kunyamezelo kwiziphumo zalo zokunyanga ukunganyamezeli, ukunyamezelana kwiziphumo ze-ological-tetrahydrocannabinol kwi-CB1 i-receptor agonist-evuselelekileyo i-guanosine 5'-O- (3 - [(35) S] thio) triphosphate yokubopha, kunye nokuxhomekeka njengoko kubonisiwe kukuziphatha okungafunekiyo kwe-rimonabant, ngaphandle kohlobo lwe-genotype.
JZL -184 IINKCUKACHA ZEZIKHONO
8. Umsebenzi we-Biological-CAS: 1101854-58-3
I-JZL-184 ikhetha ukuthintela i-MAGL, i-enzyme ikakhulu inoxanduva lokuthotywa kwe-endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG). I-Anandamide kunye ne-2-AG zii-endocannabinoids ezimbini ezingapheliyo ezenza ii-cannabinoid receptors CB1 kunye ne-CB2. I-Anandamide ubukhulu becala i-acid acid i-amide hydrolase (i-FAAH), ngelixa i-monoacylglycerol lipase (MAGL) kucingelwa ukuba yi-enzyme ikakhulu ejongene nokuthotywa kwe-2-AG. Kunzima ukwahlulahlula imisebenzi yezi zimbini kuba uninzi lwee-inhibitors ezikhoyo ze-MAGL azikhethi, kwaye zithintela i-FAAH okanye ezinye ii-enzymes. I-JZL-184 yeyona inhibitor yokuqala yokukhetha ye-MAGL ene-nanomolar portency kunye nokukhetha okungaphezulu kwama-200 kwi-MAGL vs FAAH. Xa ulawulwa kwiimpuku, i-JZL-184 inyuse amanqanaba e-2-arachidonoylglycerol kwingqondo malunga ne-8-fold, ngaphandle kwesiphumo kumanqanaba e-anandamide.
9. I-inhibitors ekhetheke kakhulu ye-monoacylglycerol lipase ethwele iqela elisebenzayo
I-endocannabinoids i-2-arachidonoyl glycerol (i-2-AG) kunye ne-N-arachidonoyl ethanolamine (i-anamamide) ihlaziywa kakhulu yi-monoacylglycerol lipase (MAGL) kunye ne-fatty acid amide hydrolase (FAAH), ngokulandelanayo. Ukufunyanwa kwangoko kwe-O-aryl carbamates efana ne-JZL-184 njengendlela yokukhetha i-MAGL inhibitors iye yakwenza uphando olusebenzayo lwe-2-AG indlela yokutshintshela kwi-vivo. Nangona kunjalo, i-JZL-184 kunye nezinye i-MAGL inhibitors ezibikwayo zibonakalisa i-low-level reactivity nge-FAAH kunye ne-peripheral carboxylesterases, ezinokuthi zibenzima ukusetyenziswa kwezifundo ezithile. Apha, sichaza iklasi ehlukileyo ye-O-hexafluoroisopropyl (HFIP) carbamates evimbela i-MAGL kwi-vitro kwaye i-vivo ibe nefuthe elihle kakhulu kwaye iphucule kakhulu ukhetho, kubandakanyeka ukubonisa akukho-reactivity ebonakalayo ne-FAAH. Ezi ziphumo zichaza i-HFIP carbamates njenge-chemotype ephathekayo yokuvimbela i-MAGL kwaye kufuneka ikhuthaze ukulandela ezinye i-serine hydrolase inhibitors ezithwala amaqela asebenzayo afana nezakhiwo ze-substrates zendalo.
10. Isikhokelo ekuthengeni i-JW-642 MAGL inhibitor Inyathelo nenyathelo
♦ Khangela i-JW-642 Powder (1416133-89-5) kwi-AASraw
♦ Khangela I-JW-642 Powder Windows XP, kwaye ubhale phantsi iifirmnets zakho.
"Umthombo woLutsha": i-NAD + ne-NMN njengeSongezelelo
Izinto ze-8 ezibalulekileyo zePowderolone Powder I-8 Ininzi Ubukhulu Bamachiza Wezobisi Zobunzima Kwili hlabathi